तस्वीरमा जीवन र जगत: June 2009
अरुको Camera बाट केहि तस्विरहरु
तरोताजा समाचारहरु पस्किएर हामीलाई भुत्तुक्कै पार्ने नेपाली भाषाको पहिलो ब्लग ( मैले त नेपाली राष्ट्रिय ब्लग भनेरै घोषणा गरेको हुँ ) माइसंसार मार्फत परिचित साथी लुनाले केहिदिन अघि ईमेल मार्फत केहि तस्विरहरु बाँड्नुभएको थियो । ति नै मध्येका केहि राम्रो लागेर ; वहाँसँग अनुमति मागेर यता ब्लगमा देखाउन ल्याएको छु । हेरौं बिभिन्न ब्लगहरुमा कमेण्ट लेखेर हामी मध्ये धेरै माझ चिनिनुहुने लुनाजीको Camera बाट केहि तस्विरहरु -
र अन्त्यमा यि तस्विरहरु पठाउनुहुने लुनाजी , वेल्जियमबाट
यस फोटो ब्लगमा तस्विरहरु राख्न अनुमति दिनुभएकोमा लुनाजीलाई सहस्र धन्यवाद !
Posted by दीपक जडित at 1:36 AM4comments:
वरिपरीका केहि तस्विरहरु
हिँजो साँझपख ( रात नै भन्नुपर्ला त्यसो त रातीको ११ बजेतिर हो तर यो ठाउँमा राती ११.३० सम्म घाम अस्ताएकै नहुने आजभोली त्यसैले साँझ भन्देको ) क्यामेरा बोकेर बाहिर निस्केको थिएँ । समुन्द्रको किनार , जँगल (एयरपोर्टछेउ) तिर पुगेर केहि फोटोहरु खिचेको थिएँ । ति नै लिएर आएको छु तपाईंहरुलाई देखाउन ।
सबैभन्दा पहिले केहि जँगली फूलहरुको सुन्दरता हेरौं ।
घर रोपुवा ( जनावर भए पालुवा हुन्थ्यो बनस्पतिलाई रोपुवा भन्दा हुन्छ होला नि ? ) नै हो क्यारे यो चैं फूल त तर जँगल तिर फूल्दा अझैं राम्रो लाग्दो रहेछ हेर्नलाई ।
यो चैं त पक्का जँगली फूल हो है
सुन्दरता फुलेको , फक्रिएको फूलमा मात्रै कहाँ हुने हो र ? ल हेर्नुस् न यो फुलिसकेर सुकेको फूल पनि कति सुन्दर !
Moose साह्रै प्रसिद्द अलास्कामा । बाटोबाटै डुल्दै गरेको भेटिने । यसैलाई हेर्ने पनि धोको हुन्छ यहाँ घुम्न आउनेहरुको । मैले पनि बाटोमै चर्दै गरेको बच्चो Moose भेटेँ र त्यस्को केहि तस्विरहरु पनि खिचेँ ।
बाटोमै रोकिएर Moose को फोटो खिच्दै गर्दा प्लेन आयो टाउको माथी हतार त्यस्को पनि खिचिदिएँ ।
पर पर हुँदै प्लेन अदृश्य भएपछि जँगलतिर यौटा सुकेको रुखमा चिल बसेको देखेँ । बिस्तारै अघि बढ्दै त्यस्को पनि फोटो खिचेँ । मैले फोटो खिचेको थाहा पाएझैं उसलाई भने त्यै बखत बिष्ट्याउनु पर्ने ।
थप फोटो खिच्दै गर्दा थाहा पाएर उड्यो चिल पनि ।
थप यो फोटो
र यो चैं हिँजो देखिएको एँकरेज डाउनटाउन
Posted by दीपक जडित at 12:01 AM 1 comment:
Seward यात्राकै थप तस्विरहरु
यसपटक पनि सिवर्ड यात्राकै केहि (निक्कै) तस्विरहरु राखेको छु । निक्कै नै खिचिएछ । कुनै पनि फाल्न मन नलाग्ने र ब्लगमा हाल्न पनि पगितो नै हुने त्यसैले छानछुन पारेर यति राख्दा पनि अझै सकिएको छैन । अर्को एकपल्टलाई पनि यहि यात्राकै फोटोहरु राख्नुपर्ने भयो । अलिपछि राख्ने विचार गरेको छु । अहिलेलाई प्रसान्त महासागरमा हेलिँदै र हल्लिँदै खिचेका तस्विरहरु -
Posted by दीपक जडित at 2:12 AM4comments:
Valdez घुम्न जाँदाका तस्विरहरु